Deg Deg: Ra’iisul wasaaraha oo magacaabay wasiiru cusub – Radio Muqdisho
Wareegto ka soo baxday xafiiska Ra’iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, mudane Xasan Cali Kheyre ayaa lagu magacaabay wasiiru cusub iyadoo sidoo kale xilka laga qaaday wasiiro, halka qaarna xilka loo bedeley.
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya mudane Daahir Maxamuud Geelle ayaa wareegtada Ra’iisul wasaaraha ka akhriyay warbaahinta dowladda, waxayna kala yihiin;
Mudane C/laahi Goodax Barre, waxaa loo magacaabay wasiirka waxbarashada, Hidaha iyo Tacliinta sare.
Sheekh Nuur Maxamed Xasan, wasiirka Owqaafta iyo arimaha diinta.
Xuseen Sheekh Maxamuud Xuseen, wasiirka Xanaanada Xoolaha.
Mudane C/laahi Bidaan Warsame, wasiirka Kalumeysiga iyo Kheyraadka badda.
Mudane C/qaadir Sheekh Cali Bagdaadi, wasiiru dowladaha madaxtooyada.
Mudane Shawaqar Ibraahim Cabdal, wasiir ku xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre ayaa faray wasiirada cusub in si deg deg ah xilkooda kula wareegaan.
Deg deg: Ra’iisul wasaaraha oo wasiiro cusub magacaabay